दसैंलाई धार्मिक लेपले विवादित बनाइयो
कला / साहित्य समाज
राजन मुकारुङ काठमाडाैं, १८ असाेज
बाल्यकालमा मेरा लागि दसैं रमाइलोकै कुरा थियो । मिश्रित समाजमा हुर्केको हुनाले सानोमा दसैं भन्नेबित्तिकै रमाइलो नै हुन्थ्यो । दसैं आएपछि खुशी हुन्थ्यौं । नयाँ लुगा लगाउन पाइने, गाउँभरि पाहुना र आफन्तको भीड लाग्ने हुनाले हामी केटाकेटी रमाउँथ्यौं । भाग्दैभाग्दै मामाघर जानेदेखि लड्ने गरी पिङ खेल्नेसम्मका काम दसैंमा नै गरिन्थ्यो । त्यसकारण दसैंप्रति मेरो भावनात्मक समर्थन प्यारो छ ।
यस्तै, मेरो हजुरबुबाको चन्द्रशमशेरसँग दोस्ती थियो । उनले गाउँभरिमै सबैभन्दा ठूलो समारोह गरेर दसैं मनाउँथे । दसैंमा ठूलो भोजभतेर हुन्थ्यो । गाउँघरका सबै मानिस टीका लगाउन हाम्रै घरमा आउँथे । तर, बाध्यात्मक रूपमै किराँतीलाई दसैं मान्न लगाइयो भन्ने उहाँलाई बोध भएपछि २०४७ पछि हजुरबुबाले पनि दसैं मान्न छोड्नुभो ।
शायद त्यसमा आर्थिक–सामाजिक कुरा पनि जोडिएको थियो होला । ठूलो तडकभडक गर्न ठूलै रकमको आवश्यकता पर्छ । दक्षिणा मात्रै दिँदा पनि कति धेरै खर्च हुन्छ ! यसले पनि केही मानिसले त दसैं मान्न छाडेका हुन् ।
जब म आफ्नो साहित्य लेख्न थालें तब मेरो अध्ययन समाज र संस्कृतिसँग पनि जोडियो । दसैं, तिहार र अन्य चाडपर्वका बारेमा मैले सोचविचार गर्न थालें । हरेक सांस्कृतिक विम्बलाई धेरै आयामबाट हेर्नुपर्छ भन्ने बोध मलाई भयो । यसबीचमा के दसैं हामीमाथि थोपरिएको हो ? के यसले एकल जातीय शक्तिकै पक्षपोषण गर्छ ? यस्ता अनेकन प्रश्न मेरा दिमागमा आउन थाले । इतिहासको समीक्षा गर्न थालें ।
फेरि जंगबहादुर राणाले दुई जना किराँती, रालिहाङ र रिदामालाई मारेको घटना पनि सुन्यौं । उनीहरूले आफूलाई किराँती भएकाले दसैं मान्दैनौं भने । त्यसैकारण जंगबहादुरले उनीहरूको हत्या गरे । यसले गर्दा दसैंको हेजिमोनीबारे सोच्न बाध्य भएँ ।
पछि किराँती र जनजातिले दसैं नमान्ने भनेर अभियान नै चलाए । तर, राजनीतिक विविधताले गर्दा कसैले दसैं माने त कसैले मानेनन् । आआफ्नो पार्टीले बोकेको विचारलाई अवलम्बन गर्दै जनजातिले दसैंलगायत हिन्दु चाडपर्व मनाउन थाले ।
जब म आफू समाज र संस्कृतिलाई बुझ्न थालें, तब म यसप्रति गम्भीर बनें । मलाई लाग्यो कि दसैं एउटा संस्कृति हो । यो नेपालीको महान् चाड भनिनुपथ्र्यो । आम मानिसको चाड हुनुपथ्र्यो । नेपाली सभ्यता र परम्पराको विशिष्ट सांस्कृतिक विम्ब बनाएर अघि बढ्न सकिन्थ्यो ।
हामीले हिजोअस्ति भर्खर त नयाँ राष्ट्रिय गान बनाइयो भने दसैंलाई पनि त नयाँ मनले अँगाल्न सकिन्छ । सबैको बनाउन सकिन्छ । तर, आज दसैंलाई धर्मको लेपन लगाइयो । अन्तिममा यसलाई हिन्दुहरूको महान् चाड भन्दै अगाडि बढाउन खोजियो । अनि धार्मिक अन्धभीरुले यसलाई बखेडा बनाउन खोजे । आआफ्नो स्वार्थमा ढालेर आआफ्नो फाइदाले चाडवाडलाई अँगाल्न खोजे ।
मेरो दृष्टिमा त यो एउटा सुन्दर चाड हो । मौलिक छ । हजारौं वर्षको सभ्यता र सांस्कृतिक विम्ब बोकेको छ । यसको आगमनले सबै नेपालीलाई उत्साह सिर्जना गर्न सकोस् भन्ने हाम्रो कामना हो । कांग्रेस लोकतान्न्त्रिक पार्टी हो तर उसले पनि धर्मको लफडा झिकिरहेको छ । राजावादी त झिक्ने नै भए । उनीहरूले अलिकति भोट बढी पाउने आशले पनि यस्तो बोलेका हुन् । संस्कृतिजस्तो विशिष्ट कुरालाई यसरी तानातान गर्दा देशकै शान गिर्छ ।
तर यसलाई आम नेपालीको संस्कृति बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । नेपाली संस्कृतिको रूपमा विकास गर्नुपर्छ । कसैलाई दबाउन र कसैलाई फुलाउन दसैंलाई प्रयोग गरिनु हुन्न । यसो गर्न सके संसारकै उदाहरणीय चाड बन्न सक्छ दसैं । र, संस्कृतिको अनुपम सौन्दर्य हामी विश्वलाई प्रस्तुत गर्न सक्छौं ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, असोज १८, २०७६, ०७:२२:००